Golaha Ammaanka oo kulan ka yeeshay xaaladda dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha Ammaanka oo kulan ka yeeshay xaaladda dalka
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ku taliyay in dib loo billaabo wadahadalladii xal u raadinta doorashooyinka ee u dhaxeeyay Dowladda Federalka Soomaaliya iyo Dowladaha xubnaha ka ah.
NEW YORK, USA – Shir albaabadu u xiran yihiin oo Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan, looga dhageytay warbixin ku saabsan xaaladda Soomaaliya, ayaa lagu baaqay in dib loo billaabo, wadadahadallada, laguna soo laabto teendhada Afisyooni.
Go’aanka Qarmada Midoobay waa mid cad, waxayna hore u sheegeen inaysan taageri doonin muddo kororis, doorasho aan la isla oggoleyn iyo fal kasta oo keeni kara amni darro iyo fowdo, hayeeshee, waxaa kulankaan albaabdu u xirnaayeen warbixintiisa bannaanka soo dhigay dalal ka mid ah Shan iyo tobanka xubnood ee jogtada ah.
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibada Ireland, ayaa lagu sheegay in hoggaamiyaasha Soomaalidu dib ugu laabtaan, wada-xaajoodyadii doorashooyinka, si loo hirgaliyo doorashooyin la isla oggol yahay oo xilligeeda ku qabsooonta.
Sidaas oo kale, war ka soo baxay ergada Norway ee Golaha Ammaanka, ayaa lagu sheegay in kalya jidka furan uu yahay in dib loo billaabo wadahadalladii doorashada ee ku saleysanaa heshiiskii 17 September 2020, lagu gaaray caasimadda Soomaaliya.
Dhanka kale, Safiirka India ee Qaramada Midoobay T. S. Tirumurti, wuxuu sheegay in isqabqabsiga siyaasadda ee ka taagan Soomaaliya ay fursad siineyso Kooxda Al-Shabaab, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dib loogu laabto miiska wada hadalaka.
Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaan fadhin, waxaana iska soo dabadhacaya baaqyada loo dirayo Madaxda Soomaaliya, ee ku aaddan dib u billaabidda wadahadallada.